Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo kormeeray xero ay ku jiraan ciidanka XDS ee ku sugan Beledweyne | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo kormeeray xero ay ku jiraan ciidanka XDS ee...
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo kormeeray xero ay ku jiraan ciidanka XDS ee ku sugan Beledweyne
Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe Madaxweyne ku-xigenka Maamulka HirShabeele oo ku sugan magalada Beledweyne ayaa maanta booqday taliska guutada 10aad ee Lamagalaay.
Madaxweyne ku-xigeenka HirShabeelle oo ay wehliyaan xubno ka mid ah golaha Wasiirada maamulka HirShabeele ayaa waxa ay kormeereen qeybaha ay ka koobantahay xerada ciidanka, waxaana uu ku warejiyay Labo neef oo geel ah.
Taliyaha guutada 10 aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Tawane Axmed Gurey ayaa uga mahad celiyay booqashada Madaxweyne ku-xigeenka HirShabeelle uu ku tegay xerada Lamagalaay ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay ku shaqeyaan marxalad adag, loona baahanyahay in lagarab istaago .
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboledka HirShabeele Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe ayaa shegay in ay ka warqabaan marxaladaha ay ciidanka ku shaqeeyaan, waxaana uu balan qaaday in ciidanka si dhow looga warqabi doono.
Dhinaca kale Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeele ayaa kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana kulamadan looga hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarka iyo amniga deegaannada maamulka Hirshabeelle.
Guddoomiyaha Degmada Beledweyn Maxamed Axmed Food Cade ayaa Madaxweyne ku-xigenka HirShabeelle uga warbixiyay xaaladda amni iyo tan bulsho ee ka jirta degmada.
Madaxweyne kuxigeenka hirshabeele cali cabdulahi xuseen ayaa sheegay in mas’uuliyinta maamulka ay diyaar u yihiin in ay xaliyaan wax kasto oo caqabad ku noqon kara habsaami u socodka howlaah maamulka HirShabeele
Cabdishakuur Cismaan Cali.
Previous articleMaamulka Degmada Hiliwaa oo deeq raashin ah u qeybiyay qoysas ku nool Ceel-Carfiid
Next articleWasiirka amniga oo saldhigo Boliisku leeyihiin komeerray